Momba anay - Qingdao Yuanhengtong Machinery Co., Ltd.
Fitaovana milina lamba
Machining centres nc faritra
Sipa milina fitaratra
Niorina tamin'ny 2012, Qingdao Yuanhengtong Machinary Co., Ltd. dia manampahaizana manokana amin'ny R&D sy ny famokarana fitaovana tsy manara-penitra, ary fitaovana namboarina ho an'ny tontolo iainana natao ho an'ny tsipika famokarana mandeha ho azy.
Fanapahana faritra tsy misy fenitra, faritra vy marina, faritra mekanika, famolavolana vy tsy misy fangarony, fanodinana faritra vy tsy misy fangarony, fanodinana sy famokarana faritra mekanika. Ny vokatra dia mihoatra ny karazany 1000. Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny sehatra isan-karazany toy ny instrumentation, ny fifandraisana, ny fitaovana mekanika, ny faritra fiara, sns. Ny kalitaon'ny vokatra dia eo amin'ny toerana misy eo amin'ireo mpiara-miasa an-trano.
Ireo akora novokarina dia vy vy, vy, varahina, aliminiasa sns, izay tsara indrindra amin'ny fanodinana ireo faritra vy tsy misy fangarony, fanodinana kofehy anatiny sy ivelany ary fanodinana lathe amin'ny faritra maro varahina, aliminioma ary vy. Qingdao Yuanhengtong Machinery Co., Ltd. dia manana hery ara-teknika matanjaka. Ny ivon-toeran'ny milina marobe efa mandroso, ny milina mandeha ho azy mazava ho azy, ny lathe fifehezana nomerika CNC, ny fantsom-pitaovana, ny makiazy ary ny fitaovana famokarana hafa manohana, ny fihenan'ny fanodinana dia mahatratra 0,005 mm, ary ny fanandramana mifanaraka amin'izany dia vita.
Miaraka amin'ny traikefa matihanina manankarena sy tanjaka ara-tsiansa sy ara-teknolojia, manavao hatrany izahay, manomboka amin'ny famolavolana vokatra ka hatramin'ny famokarana faritra, mba hanomezana vokatra tsara ho an'ny mpampiasa. Ary miaraka amin'ny laza tsara sy ny serivisy kalitao tsara, dia tian'ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany izany. Tena raisinay ny mpanjifa sinoa sy vahiny tonga hampiasa vola, hanafatra, hanodina komisiona, hamolavola ary hikirakira. Fanatanterahana milina, fanodinana vy, fanodinana vy, kojakoja enti-miasa, fanodinana vy tsy misy fangarony. Vonona izahay hiara-hiasa am-pahatsorana amin'ireo mpiara-miasa ao an-trano sy any ivelany mba hiara-mamorona mahafinaritra!
Torolàlana momba ny vokatra - Vokatra asongadina - Tags mafana - Sitemap.xml - AMP Mobile